फेरि के भयो सियोना नानीलाई ? सके सहयोग गर्नुहोला नसके सक्दो शियर गर्नुहोला – Sandesh Press
फेरि के भयो सियोना नानीलाई ? सके सहयोग गर्नुहोला नसके सक्दो शियर गर्नुहोला
December 26, 2020 228
सियोना श्रेष्ठको लागि एती धेरै रकम सयोग गरे इशा गुरुङग ले।इशा गुरुङ एक चिरपरीचित नाम हो उनी बिदेश मा रहेर नेपाली गरीब दुखी हरु आ,सुँ पुछ्ने काम गर्छन् । कुनै स्वार्थ नराखी आफुले सक्ने सयोग र अरुलाई सयोग गर्न भनी अबियान हरु सधैं चलाऊने गर्छन् ।
अहिले उनी सियोना बचाउ अबियान चलाईरहेको छ । भखरै उन्ले धेरै पैसा संकलन गरी सियोना नानु को खाता मा पठाई सकेको छ। एदी तपाईं हरु नि सयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने उहालाई संपर्क गर्न सक्नु हुने छ ।
इशा गुरुङग एक चिरपरीचित नाम हो उनी बिदेश मा रहेर नेपाली गरीब दुखीहरु आ,सुँ पुछ्ने काम गर्छन् । कुनै स्वार्थ नराखी आफुले सक्ने सयोग र अरुलाई सयोग गर्न भनी अबियान हरु सधैं चलाऊने गर्छन् । अहिले उनी सियोना बचाउ अबियान चलाईरहेको छ ।
त्यस्तै नेपालमा कोरोनाको अवस्था नि’यन्त्रण गरेर अब सरकारले मात्र नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । कोरोना समुदायमै फैलिसकेकाले सरकारले मात्र त्यसको परिक्षण सम्भव नहुने भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका सं’क्रमित बढ्दै गए पनि अब अनिवार्य रुपमा कोरोना परिक्षण गराउन आग्रह गरेको छ । अब आफ्नै खर्चमा पीसीआर परिक्षण गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना फैलदै गएको अवस्थामा सपिङ मल, रेष्टरेन्ट, होटल, उद्योग, व्यवसायमा कार्यरत व्यक्ति र उनीहरुसँग सम्पर्कमा आउनेहरुमा कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको बताएका छन्।
त्यसैले त्यस्ता व्यवसायहरुमा संलग्नहरुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।हाल अधिकांश अस्पतालमा ५ हजार ५ सय तिरेर पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। निजी अस्पतालहरुले भने उक्त शुल्कमा थप १० प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने बताइएको छ । तर पैसा तिरेर सबैले पीसीआर परीक्षण गराउने अवस्था नभएको भन्दै स्थानिय स्तरवाट यसको वि’रोध हुँदै आएको छ । लामो समयको लकडाउन र ब्यवसाय सबै ठप्प भएको अवस्थामा सवै सर्वसाधारणको आम्दानीको श्रोत नभएकाले सबैले ब्यक्तिगत खर्चमा पीसीआर परिक्षण गराउन नसक्ने भन्दै वि’रोध भएको हो
Prevपाथीभरा क्षेत्रमा भि‘षण आ‘गलागी: मन्दिरनै जो‘खिममा, हेलिकोप्टरले बाहेक आ’गो निभाउने अवस्था छैन
Nextअमेरिकामा दि‘माख खाने भाइरसको संक्रमण
कोइरालासँग विवाह गर्दै गायिका अञ्जु पन्त !
किशोर र लक्ष्मी प्र कारणको खेलाडी को ? लक्ष्मीलाई झु ट बोल्न लाउने दुलही बनाएर रु न लाउने को हो ? भयो पर्दाफास (हेर्नुहोस भिडियो )